कोरोनाभाइरस: चीनले ६ दिनमा कसरी अस्पताल निर्माण गर्न सक्छ? «
कोरोनाभाइरस: चीनले ६ दिनमा कसरी अस्पताल निर्माण गर्न सक्छ?
प्रकाशित मिति : 26 January, 2020 8:22 am
१ करोड १० लाख जनसङ्ख्या भएको वुहानबाट यो सङ्क्रमण सुरु भएको थियो।
यो शहरका अस्पतालमा चिन्ताग्रस्त मानिसहरूको भिड लागेको छ र औषधि पसलहरूमा औषधिको अभाव भएको छ।
चीनले ६ दिनमै कसरी अस्पताल निर्माण गर्न सक्छ?
सार्स उपचारपछि बेइजिङमा बनाइएको अस्पताल छोडेकी एक महिला
उनले भनिन्, “यो उच्च प्राथमिकतामा परेको विषय भएको हुनाले म त्यसको भार वुहान सरकारलाई पर्छ भन्ने कल्पना गर्न सक्दिन।”
हुवाङका अनुसार “प्रकोप समाप्त भएपछि उक्त अस्पताल चुपचाप बेवारिसे बनेको थियो।”